Semalt: Izinkombandlela ze-SEO
Njengoba sazi, indlela ephumelela kunazo zonke yokukhangisa ukukhuthaza izimpahla nezinsizakalo nge-Intanethi. Namuhla, akunakwenzeka ukuthola inkampani ngaphandle kwewebhusayithi yokuthengisa, ngoba lokhu kuyisidingo esiyinhloko sebhizinisi. Kepha ukuba newebhusayithi akuqinisekisi impumelelo ngaphandle kokuphakanyiswa kwayo. Ukuphakanyiswa kwewebhusayithi kungumsebenzi oyinselele, ongafezwa kuphela yinkampani ye-SEO esebenza ngochwepheshe. Ungalokothi uthembe iwebhusayithi yakho kumagwegwe angakwazi ngisho nokuxazulula izinkinga zawo. Ukusebenza kwe-SEO njengenkonzo yokuphromotha yewebhusayithi kungokwelungelo lokweSemalt. Eqinisweni, i-Semalt ayisiwona kuphela ubuhle be-SEO kodwa futhi iyisinyathelo esinamasu sokucebisa ekugcineni.
Abanikazi besayithi abanolwazi basebenzise ukuzama ukusebenzisana namawebhusayithi abo ngokwabo noma bethemba ababambe iqhaza kule nkambu. Njengomphumela, ibhizinisi labo selishabalele. Futhi esimweni ngasinye esinjengalesi, abantu bacele uSemalt ukuthi asindise amawebhusayithi abo, asizange senqabe. Sizikhiphe ngokoqobo izingosi zabo ngaphandle kwesilayini bese sibaqhubekela ezikhundleni eziphezulu zenjini yokusesha. Kungcono ufunde la macala kuwebhusayithi yethu, okubandakanya impendulo enhle evela ezinkulungwaneni zamakhasimende. ISemalt inolwazi olukhulu nobuchwepheshe obuphakeme futhi ingabhekana nomsebenzi wanoma yikuphi ukubumbana. Ungaphumelela nge-SEO optimization, kepha kuphela uma ukwenze ngoSemalt.
Ngaphandle kobuchwepheshe be-SEO obunqenqemeni, ngeke uzuze umphumela oyifunayo. Kodwa-ke, impumelelo ayincike ekusetshenzisweni kwendlela ethile kuphela. Kubalulekile ukuhambisana nezikhathi futhi uthuthukise izinhlelo zokusebenzisa kahle. ISemalt ihlala yakhela izindlela ezintsha zokuthuthukisa amawebhusayithi, isebenzisa ubuchwepheshe obusha. Inkampani izisungule yona njengomholi wokuphakanyiswa kwe-SEO kanye nesikhulu esikhulu emhlabeni jikelele emkhakheni wokuthuthukiswa kwewebhu.
Iqembu leSemalt liqukethe ochwepheshe abasezingeni lomhlaba wonke kuzo zonke izikhala. Uchwepheshe ngamunye angakhuluma izilimi eziningana futhi unesipiliyoni esikhulu ekusebenzeni kwe-SEO. Lawa ngabaphathi abanolwazi, ochwepheshe be-SEO abaqeqeshiwe, ongoti be-IT, neqembu lababhali abanamakhono. Ngaphandle kwalokho, abaklami abasezingeni eliphakeme bayasebenza futhi eqenjini. Ngaphambi kokukhetha isixazululo esinqunyiwe, ochwepheshe banaka zonke izinto ezithinta ukusebenza kahle kokunyuswa kwewebhusayithi. Isiza ngasinye yiprojekthi entsha edinga indlela yomuntu ngamunye kanye nendlela yokwenza.
Ukuphakanyiswa kwesayithi ezinjini zokucinga kulungele amabhizinisi amaningi anikela ngemikhiqizo yawo noma amasevisi awo nge-Intanethi. Le yindlela ephumelelayo yokuthatha izimpande injini yokusesha isikhathi eside futhi ngokuqhubekayo sikhulisa isibalo sabavakashi. I-Search Engine Optimization (i-SEO), ngamagama alula, iqoqo lezenzo zokwenziwa kwangaphakathi nangaphandle okuhloswe ngalo ukwenza ngcono isikhundla sewebhusayithi enjini yokusesha. Ngakho-ke, ukuze i-webhusayithi ingabekwa kahle yizinjini zokucinga, idinga ukusetshenzelwa ngendlela eyinkimbinkimbi.
Ukuba newebhusayithi akwenzi mqondo ngaphandle kokuyithuthukisa. Ngaphandle kokusebenzisa kahle, ithrafikhi yezinsizakusebenza izoba ephansi kakhulu noma zero uma ingasebenzisi ezinye izindlela zokuheha ithrafikhi. I-SEO ilungele noma ngubani ozothengisa imikhiqizo nge-Intanethi, afuna amakhasimende, abalingani, njll. Usesho olunamandla nokukhushulwa kwamawebhusayithi kuvela njalo. Izinga le-algorithms liyathuthuka, izinsiza ezintsha zokuhlaziya ziyavela kanye nokulandelela kwemiphumela yemisebenzi eyenziwe kuyenzeka. USemalt wenza umnikelo omkhulu ekwakhiweni kohlelo lwe-SEO nokwenza kahle.
Ukuphakanyiswa kwe-SEO kuwebhusayithi eziteshini zokucinga kufaka izindawo ezintathu ezibalulekile: ubuhle bangaphandle, ukuthengiswa kwangaphakathi, nokutholwa kokuhlaziya. Inkomba ngayinye inezenzo ezahlukahlukene ezidinga ukwenziwa ngokulandelana okuthile. Ngenxa yeshumi leminyaka lesipiliyoni ekwenzeni ngcono ukusetshenziswa kwewebhusayithi, uSemalt unikeza izixazululo eziyinkimbinkimbi njenge-AutoSEO, i-FullSEO, kanye ne-Analytics yewebhusayithi eyingqayizivele. Ukuqhuba le mikhankaso kuqinisekisa ukukhuphuka ngokushesha ezikhundleni eziphezulu kwenjini yokusesha. Bhekisisa ngamunye wabo.
Iningi labanikazi bewebhusayithi baqiniseka ngokuphelele ukuthi i-AutoSEO yisisombululo esifanele sokuhambisa iwebhusayithi ezikhundleni eziphezulu ku-injini yokusesha. Akukhona ngengozi, njengoba isibalo sabasebenzisi abakwazile ukuphumelela kulo mkhankaso sikhule ngokushesha okukhulu. I-AutoSEO ifaka izigaba eziningana zezinyathelo zokuphoqelela ezenziwa ngokuxhumana njalo nochwepheshe weSemalt. Ochwepheshe benkampani nabo bathwala umthwalo wemfanelo ngomphumela ophumelelayo. Ngenqubo, ukucushwa kwewebhusayithi kuzoshintshwa ngokuya ngezidingo zokusebenzisa kahle. Ukunyusa enjini yokusesha nakanjani kuzophumelela. Nayi imisebenzi ebalulekile ebekelwe i-AutoSEO:
ukukhetha amagama afanele;
ukulungiswa kwephutha lewebhusayithi;
Umkhankaso we-AutoSEO uqala ngokushesha lapho ubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kuqala ukuhamba, futhi maduze uzothola umbiko wokuqala ngesimo sendawo yakho enjini yokusesha. Kaningi, kungaba namaphutha ekwakhiweni kwewebhusayithi, ngakho unjiniyela wethu we-SEO uhlola ngokucophelela zonke izingxenye zewebhusayithi. Lapho amaphutha esekhonjwe, uzothola umbiko onemininingwane, futhi unjiniyela we-SEO uzowaqeda. Cishe awunangxenye inqubo, kepha hlala uhlale usesikhathini nayo yonke into eyenzekayo. Ngemuva kokuthi wonke amaphutha esilungisiwe, kuzokhethwa amagama afanele. Lesi sigaba ikakhulukazi sihlose ukuthuthukisa ukutholakala kwewebhusayithi.
Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukukhethwa kwezixhumanisi ze-inthanethi. Lezi zixhumanisi zenzelwe ukuqhubeka nokufakwa kwizinsiza eziku-inthanethi. Ngoba injini yokusesha iyakuphika okuqukethwe okungenamqondo, kubalulekile ukukugcina kufanelekile futhi kunengqondo. Umsebenzi wochwepheshe bakwaSemalt ukukhetha izinsiza ezifanele ukufaka izixhumanisi. Umphathi wenkampani uyazibheka mathupha izenzo zikachwepheshe, ngakho-ke akukho okulimazayo kwiwebhusayithi yakho okuyokwenzeka. Iwebhusayithi yakho iphephe ngokuphelele.
Manje sidinga ukwenza ushintsho oludingekayo kuwebhusayithi. Umphathi weSemalt usebenza njengomeluleki wangaphandle futhi wenza izincomo ngokuhlelwa kobuchwepheshe. Omunye umbiko ukhombisa ukuthi yiziphi izinguquko okufanele zenziwe ukuze kwenziwe umkhiqizo onamandla. Ochwepheshe basebenzisa ukufinyelela kwe-FTP (I-File Transfer Protocol). Ukufinyelela kwe-FTP kuyadingeka ekuphenduleni okusheshayo kuzinguquko zenjini yokusesha ukuze wenze ushintsho oludingekayo. Njengoba isikhundla sivuselelwa njalo, uSemalt ukwazisa ngakho futhi wethula amagama angukhiye. Amagama angukhiye kumele ahambisane nokuqukethwe, kulawulwa uchwepheshe futhi. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubheka nokuqopha imiphumela emihle. Intengo yanyanga zonke yokusebenzisa i-AutoSEO ngama- $ 99.
Isebenza kanjani i-FullSEO
USemalt unikeza umkhankaso we-FullSEO, oqinisekisa ukukhushulwa ngempumelelo kwewebhusayithi ngesikhathi esifushane. Lo mkhankaso ufaka phakathi ukwenziwa kwewebhusayithi yangaphandle neyangaphakathi. Yonke inqubo iqukethe izigaba eziningana zokuphoqelela. Ekupheleni kwalezi zigaba zombili, isilinganiso sizobe siphezulu kakhulu. Njenganoma yimuphi omunye umkhankaso weSemalt, i-FullSEO iqhutshwa ngaphansi kokuqondisa kwemenenja, zonke izenzo zenziwa uchwepheshe. Kungekudala, uzoqaphela ukuthi iwebhusayithi yakho isondela ezikhundleni zenjini ephezulu yokucinga. Kumele kwaziwe ukuthi izimbangi zakho ngeke zisakwazi ukuthola isikhundla sewebhusayithi yakho.
Ukuze uqalise umkhankaso, udinga ukubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Lapho usubhalisile, iwebhusayithi yakho iqala ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo. Zonke izinto ezenziwa kulesi sigaba zizobonisa ukwenziwa kwangaphakathi. Kubandakanya izenzo eziningana ekubhekeni ukwakheka kwewebhusayithi. Uzothola umbiko ngemiphumela yokuhlaziywa kanye nohlu lwamaphutha atholakala esakhiweni sendawo. Onke amaphutha azolungiswa yisazi se-SEO, ngakho-ke awudingi ukwenza lutho. Okulandelayo, isazi se-SEO esisekela imininingwane evela embikweni sichaza umongo we-semantic. Ekusebenzisekiseni kwangaphakathi, ukukhetha kwamagama angukhiye ahlobene nodaba lwakho lwesihloko nokusatshalaliswa kwawo phakathi kwamakhasi ngamanye kubaluleke kakhulu. Amagama angukhiye okulungile kuphela angakhuthaza ukugcwala kwewebhusayithi. Ukufinyelela i-FTP kusiza uchwepheshe ukuthi enze izinguquko ezidingekayo kuwebhusayithi.
Okulandelayo ukwenziwa kwangaphandle. Kusho ukusebenza kuma-backlinks kanye nokugcwalisa izinsiza ze-niche ngabo. Kufanele siqonde ukuthi yiziphi izixhumanisi ezisebenza kangcono kakhulu ezinjini zokusesha. Lo ngumsebenzi wochwepheshe bethu. Bakuhlola ngokucophelela okuqukethwe. Kufanele uhambisane ngokuphelele nencazelo yezinsizakusebenza lapho izixhumanisi zizofakwa khona. Leli phuzu lingabhekwa njengelibaluleke kakhulu.
I-Semalt isebenza neziza eziningi ezinokwethenjelwa, ngakho-ke ngeke kube nezinkinga ngalesi sigaba. Ochwepheshe bazokhetha izinsiza ngokuqukethwe okuhambisana kakhulu nezidingo ze-SEO. Uma usungenile izixhumanisi kulawo mawebhusayithi, ungalindela ukukhushulwa okuphumelelayo. Imibiko yezikhathi ezithile ikwazisa ngoshintsho olukhona esizeni nokukhula kwesilinganiso. Uzibandakanya emkhankasweni njengesibukeli, kepha finyelela kunoma yiluphi ulwazi. Ochwepheshe bahlala bexhumana nawe ngaso sonke isikhathi.
Uma uphoqelelwa ukuthi umise okwesikhashana ukuphakanyiswa kwe-SEO, ngeke kudala inkinga enkulu. Yize i-Google isusa ama-backlinks kusuka kungobo yomlando yedatha kungakapheli inyanga, ukubekwa phansi ngeke kwehle kakhulu. Isikhundla se-rankings sizohlala sezingeni elithile, sibonga umkhankaso we-FullSEO. Izinga lizobe liphezulu kakhulu kunokuba lalinjalo ngaphambi komkhankaso. Intengo ye-FullSEO incike ezicini eziningi, ezihlobene kakhulu nesimo sewebhusayithi yakho. Intengo yokugcina izokhethwa ngemuva kokuhlolwa kwewebhusayithi yisazi sethu se-SEO neziphetho zayo. Izindleko akufanele zikwesabise ngokweqile ngoba imali engenayo ihlala iphakeme kunezindleko eSemalt.
Lapho sibhekene nezinguquko ezinkulu ezenzeka ngaphakathi kwezinjini zokusesha, kunzima kakhulu ukulwa nezinhlu zokuxhumanisa. Kunzima ngisho nokuthola amaphuzu aphambili ngokudela ukuthi ubani angaqinisekisa ikhwalithi yentuthuko yomthombo. Amasu amadala alahlekelwe ukuhambelana kwawo, futhi izindlela ezintsha zokuphromotha zisaqinisekile. Ngaphandle kokuhlaziywa kwenhloso, cishe akunakwenzeka ukufeza umphumela oyifunayo wokunyuswa. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi uSemalt wadala i-analytical system Analytics ehlose ukuthola amaphutha ezobuchwepheshe wewebhusayithi futhi azilungise. Imisebenzi esemqoka yama-Analytics yile:
Ukuhlaziya kuthola amaphutha okungenzeka kokusebenza kwesiza bese kusayina lokhu ngokushesha. Kepha akuyona ukuphela kwenhloso. Uhlelo luhlola ngokucophelela okuqukethwe kwewebhusayithi namapharamitha wezobuchwepheshe. Kuhlaziywa amawebhusayithi ezincintisana nawo, kuhlolwe amandla abo wokuncintisana. Ukuqala iqoqo lokuhlaziya, udinga ukubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Imibiko elandelayo ibonisa isikhundla sewebhusayithi yakho enjini yokusesha kanye nezikhundla zabancintisana nawe. Besebenzisa imininingwane etholakala kumbiko, ochwepheshe bethu benza izinguquko ezidingekayo kucatshangelwa amazinga we-SEO.
Ukuba ne-akhawunti evumelekile kukunikeza izinzuzo ezithile. Ungangeza noma yiliphi inani lamawebhusayithi eenkampani zangaphandle kwikhabethe lakho. Amawebhusayithi owengezile aqala ukuhlaziywa ngokuzenzakalelayo ngenkathi uthola umbiko nedatha enemininingwane. Izinjini zokusesha zivuselela ama-algorithms wazo, ngakho-ke abahlaziyi bethu kuphela abakwazi ukwenza izinguquko ezifanele kuwebhusayithi. Ukuhlaziywa okuningiliziwe kwenza sikwazi ukubona amagama afanele. Ngaphandle kwe-Analytics, akunakwenzeka ukukhetha amagama angukhiye afanele ahambelana nokuqukethwe iwebhusayithi. Ngokuthanda, kunjalo, ungangeza amagama okhiye ahlukile noma ususe okungenasidingo. Iqiniso ukuthi, isethi eyisisekelo yamagama angukhiye adingekayo isivele ifakiwe. Le nqubo izothinta ngokungangabazeki ukukhula kwethrafikhi okusheshayo.
Imininingwane yokuhlaziya iqoqwa ubusuku nemini. Ukuzibandakanya kwakho ukuthola imibiko yokusebenza nokulungisa imiphumela emihle. Ungaqiniseka ukuthi izenzo zilungile ngenjini yokucinga. Imiphumela iyamangaza: empeleni ubona isikhundla esiphezulu sewebhusayithi yakho. Ngaphezu kwalokho, izimbangi zakho ngeke zisakwazi ukukukhipha kwi-injini yokusesha. Sincoma ukusebenzisa uHlelo Lokusebenza Sohlelo Lokusebenza, oluvumelanisa yonke idatha ngokuzenzakalelayo. Ngokungasebenzi, uhlala usesikhathini ngezibuyekezo zamanje. Insizakalo ye-Analytics ifaka amaphakheji amathathu amakhulu anezindleko ezihlukile:
I-PROFESSIONAL - $ 99 ngenyanga (amagama ayisi-1 000, amaphrojekthi ayi-10, umlando wesikhundla se-1);
I-Semalt futhi ihlinzeka ngesisombululo esibanzi sokuthuthukiswa kwewebhu. Ochwepheshe bethu bakha iwebhusayithi ezentengiso ngokuya ngemininingwane yezilaleli ezihlosiwe nezinhloso zephrojekthi, bakha idizayini ehlukile esebenzayo, ukusebenza kohlelo. Sihlanganisa izingxenye zewebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle kanye nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe, ngokwezifiso amamojula e-commerce nama-API.
Ukukhiqizwa kwamavidiyo anyuswayo
Noma yiliphi ibhizinisi lihlose ukuthengisa imikhiqizo yalo noma izinsizakalo ezilalelini ezihlosiwe. Imakethe inkulu kakhulu kangangokuba kulula ukulahleka phakathi kwabaqhudelanayo uma ungatsheli abathengi abangahle kanye namakhasimende mayelana nokunikezwayo. Ukukhangisa kungahluka, kepha isikhangiso sevidiyo sithathwa njengokusebenza kakhulu. Kungathinta imizwa ukwedlula ezinye izindlela. Kungakho uSemalt eletha insizakalo eyingqayizivele yokwakha ividiyo ekhethekile. Kuzoqokomisa zonke izinzuzo zenkampani yakho futhi izoletha ithrafikhi eningi kuwebhusayithi yakho. Ungase ukhethe ifomethi yevidiyo ngesifanekiso noma u-oda inketho ngokuthanda kwakho. Ividiyo yokuphakamisa kaSemalt izodonsela amakhasimende amaningi futhi yenze ibhizinisi lakho lichume.
Ukufingqa ukubuyekezwa kwenkampani yethu, singacebisa ukuthi singacabangi isikhathi eside kakhulu ngokuthi singaya kuphi ukuze kuphakanyiswe iwebhusayithi ephumelelayo. Impendulo ingaphezu kokusobala. Sifaka ama-accents ngendlela ehlukile. USemalt wenza okungaphezu nje kokunyuswa kwamawebhusayithi, kwenza abantu bacebe ngokusebenzisa ubuhle be-SEO. Impumelelo yakho yidumela lethu. Xhumana nathi, silungele ukuthatha umthwalo wemfanelo ngobuningi bakho.